2015 | ဂန္တ၀င် | Page 8
Relationship တစ်ခုမှာ သတိထား ရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားလေးများ။
GandaWinAdmin - Sep 15, 2015
သာယာတဲ့ Relationship တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ အဲဒီRelationship အပေါ်မှာထားတဲ့ ခံယူချက်တွေက သိပ်ကို အရေးပါနေပါတယ်။ ချစ်သူနှစ်ဦးဆိုလည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ထိ တန်ဖိုးထားလဲ၊ သည်းခံနားလည်နိုင်လဲ၊ တစ်ယောက် အိမ်မက်ဆန္ဒတစ်ယောက် ဘယ်လောက် ပါရမီဖြည့်နိုင်လဲ ဆိုတာတွေက သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ ခံယူချက်လေးတွေနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ Relationship...
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ relationship ဆိုတိုင်း ပြဿနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေ မရှိတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီခက်ခဲတဲ့ အချိန်တွေကို အတူဖြတ်ကျော်ရတာတောင် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဖေးဖေမမနဲ့ ကြင်နာနွေးထွေး တတ်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ -အမည်မသိ (Unknown)
အပေါ်ယံကြည့်ပြီး လူတစ်ယောက်ကို ကောက်ချက်မချသင့်ကြောင်း ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု
အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ရယ်၊ သူ့အဖေဖြစ်သူရယ် ရထားလေးနဲ့ ခရီးထွက်ကြတယ်။ လက်ထပ်ပြီးကာစ ဖြစ်ပုံရတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲဟာ သူတို့ သားအဖရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ခုံမှာ ထိုင်နေကြပါတယ်။ (၂၄) နှစ်အရွယ်ကောင်လေးက ပြတင်းပေါက်ကနေ ငေးရင်း "အိုး… ဖေဖေ ကြည့်ပါအုံး၊ သစ်ပင်ကြီးတွေ ကျွန်တော်တို့ နောက်မှာကျန်ခဲ့ပြီ။"...
သင့်ရဲ့ အနည်းငယ်သော ပေးဆပ်မှုက လိုအပ်သူအတွက် တစ်ဘဝစာလောက် အရေးပါနေတတ်ပါတယ်
GandaWinAdmin - Sep 14, 2015
​ မြူတွေဆိုင်းနေတဲ့ အေးချမ်းလှတဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုမှာပေါ့။ ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်း ကမ်းစပ်မှာ လမ်းလျှောက်လာတုန်း ကျွန်မနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ခပ်လှမ်းလှမ်းလောက်မှာ လူရိပ်တစ်ရိပ် လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ သေချာကြည့်လိုက်တော့ သူက ခါးလေးကိုင်းပြီး တစ်ခုခုကို ကုန်းကောက်လိုက်၊ တစ်ခါ ရေစပ်ဘက်ကို ပစ်လွှင့်လိုက်နဲ့ တစ်ယောက်တည်း အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာ...
အင်္ဂါနေ့လေးအတွက် ရယ်မောစရာ ဟာသလေးများ အပိုင်း – ၄
၁။ ကဲ…သိပြီလား… အဖေ။ အကြီးဖြစ်ပြီး မင်းမရှက်ဘူးလားကွ ဟင် ပီတာ(Peter) … ဘာလို့ ကိုယ့်ညီမလေးကိုယ် ရိုက်ရတာလဲ… ပီတာ။ ဟာ ဖေဖေကဗျာ… ဘာမှလည်း မသိဘဲနဲ့… သားတို့က ပန်းသီးတွေနဲ့ အာဒံနဲ့ ဧဝ လုပ်တန်း ကစားနေတာဗျ… သားက အာဒံ… သူက ဧဝလေ…...
GandaWinAdmin - Sep 13, 2015
မိန်းကလေးတွေ ယောကျာ်းလေးတွေထက် ထိခိုက်ခံစားလွယ်တယ်၊ လိုအပ်တာထက် ပိုစိုးရိမ်တတ်ကြတယ်။ အခုလို ဖြစ်ရတာဟာ သူတို့ရင်ထဲက ကြီးမားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကြောင့်ပါ။ -အမည်မသိ (Unknown)
၂ဝ၁၅ ၏ အပတ်စဉ် ဂန္ထဝင်ဗေဒင် (စက်တင်ဘာလ ၁၄ မှ ၂ဝ ရက်နေ့အထိ)
၁။ မိဿ ရာသီဖွား (Aries ) မတ်လ (၂၁) မှ ဧပရယ် (၁၉) ရက်အတွင်း မွေးဖွားသူများ အခုအချိန်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာဆိုးတွေကို တိုက်စားသွားတော့မယ့် အချိန်ကောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်က အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေက တစ်ကယ်တော့ ဘဝအတွက် ရေရှည်ကောင်းဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တာပါလားဆိုတာ သိသွားပြီး...
မဟေမာမောင်နဲ့ (၅) မိနစ်တာအမေးအဖြေ
ကိုယ် ရွေးချယ်ထားတဲ့ Professional ကို တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တာ တကယ့်ကို အတုယူသင့်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုပါ။ မဟေမာမောင် ကိုယ့်နယ်ပယ်ထဲမှာ ဒီလိုအခြေအနေရောက်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ အားထုတ်မှုလေးတွေရယ်၊ ခံယူချက်တွေရယ်ကို စာဖတ်ပရိသတ်ကြီး အတုယူလို့ရအောင် အနည်းငယ် မေးမြန်းပါရစေရှင်။ ၁။ အစ်မ ရဲ့ Education background လေးကို...
ချစ်လှစွာသော သမီးလေး လူ့ဘဝဆိုတာ သိပ်ကိုလှပပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတရံ အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ဘဝရဲ့အလှတရားတွေကို မေမေတို့ အသိအမှတ်မပြုနိုင်ကြဘူးလေ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလို ခက်ခဲလှတဲ့ အခြေအနေတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ရမယ့် ဘဝမုန်တိုင်းတွေအတွက် ပိုပြီးကြံ့ခိုင်သန်မာလာအောင် မေမေတို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်တွေကုန်လာတာနဲ့အမျှ မေမေတို့တွေအားလုံးလည်း ဒီအခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမှာပါပဲ။ တချို့တွေကျတော့...
ခိုင်မာတဲ့ Relationship တည်ဆောက်လိုသူတိုင်း လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးများ။
ကျွန်မတို့ဟာ သူစိမ်းတွေကိုဆိုရင် သည်းခံလိုက်လျော တတ်ကြပြီး ကိုယ်နဲ့ တစ်သက်လုံး ပေါင်းလာခဲ့တဲ့ မိသားစုတွေ၊ အိမ်ထောင်ဖက်တွေကိုကျတော့ သည်းခံ ခဲကြပါတယ်။ ဒီလိုအပြင်မှာ သည်းခံလာသမျှ အိမ်ကျမှ နိုင်တဲ့သူတွေအပေါ် ပေါက်ကွဲတာမျိုးက တဖက်က လူအတွက် လုံးဝ မတရားပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် မျှမျှတတဆက်ဆံနိုင်ဖို့ သိပ်ကို...
ဗိုက်သားလေးတွေ ကျစ်လျစ်ပြီး အဆီကျလှပစေဖို့
GandaWinAdmin - Sep 10, 2015
၁။ အစားမစားခင် ရေတခွက် သောက်ပါ။ ၂။ တစ်နေ့ကို အစာနည်းနည်း စီ (၅) ကြိမ်လောက်စားပါ။ ၃။ အစားစားစဉ် ဖြေးဖြေးနဲ့ ကြေညက်အောင် ဝါးစားပါ။ ၄။ သွေးလည်ပတ်မှု အားကောင်းစေဖို့ တစ်နေ့မိနစ်(၂၀)လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ၅။ ကိုယ်စားနိုင်တဲ့ ပမာဏနဲ့ ချင့်ချိန်စားသောက်ပါ။ ၆။ အစာအိမ်နံရံတွေ တောင့်တင်းသန်မာစေဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထား ရှိနေပါ။ ၇။...
ကိုယ်ချစ်သူက ကိုယ်တစ်သက်လုံး လက်တွဲလို့ရတဲ့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် ဖြစ်လာနိုင်မလား
ယောက်ျားလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ချစ်မိတဲ့သူနဲ့ တစ်သက်လုံးပေါင်းဖက်ချင်ကြတာ သဘာဝပါ။ ခက်တာက ချစ်တိုင်းလည်းမညားဆိုသလိုပဲ လူနှစ်ယောက် တစ်သက်လုံး ပေါင်းဖက်ဖို့အတွက်တော့ အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ အောက်ဖက်မှာတော့ ချစ်သူဘဝမှာ သူနဲ့ကိုယ်ကြားမှာ ရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးလေးတွေက တစ်ဆင့် တစ်ဘဝလုံး လက်တွဲဖို့ အဆင်ပြေမပြေ ဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ အချက်လေးတွေပဲ...
အားမတန်ဘူး အထင်နဲ့ပဲ မာန်မလျှော့လိုက်မိပါစေနဲ့
တစ်နေ့မှာ ဆင်တွေ ထိန်းကျောင်းနေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဆင်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးဆန်းမှုတစ်ခုကို စတင်သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ ဆင်လို သတ္တဝါကြီးတွေကို ကြိုးသေးသေးလေးတွေနဲ့ ချည်ထားတာကိုပါပဲ။ ဆင်တွေရဲ့ ရှေ့ခြေတစ်ဖက်ကိုပဲ ကြိုးလေးနဲ့ ထိန်းထားပြီး အခြား ခိုင်ခံ့တဲ့ ကြိုးတွေ လှောင်အိမ်တွေနဲ့ မထားကြတာ သိပ်ကို...
သင် ဘယ်လိုလူမျိုးကို ခင်ပွန်းအဖြစ်ရွေးချယ်ချင်ပါသလဲ။
A. လက်မကို သင် နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် သင် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူ ဥပမာ သင့်သူဋ္ဌေး၊ ဒါမှမဟုတ် အထက်လူကြီးမျိုးကို သင်သဘောကျတယ်။ B. လက်ညိုးကို သင်ပိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် သင်နဲ့ သူငယ်ချင်းလို ပေါင်းသင်းတဲ့သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးကို ဂန္တဝင်မဂ္ဂဇင်း မှတင်ဆက်ပါသည်။ C. လက်ခလယ်ကို သင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင် သင်နဲ့စိတ်ချင်းတူပြီး သင့်ကို ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုး မှာမဆို...
GandaWinAdmin - Sep 9, 2015
ခေါင်းကိုက်ခြင်းက လူတော်တော်များများကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ဝေဒနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ အတွေးလွန်သွားခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း မနားမနေ အလုပ်လုပ်ခြင်းတွေကြောင့် လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့ကျလည်း ဒေါသအရမ်းကြီးပြီး ရုတ်တရက်ခေါင်းတွေ ကိုက်ခဲသွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာတွေကို အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းဖို့ အောက်ဖက်မှာ...
သင့်အတွေးအခေါ်လေးတွေကို ပြောင်းလဲပေးမယ့် ပုံပြင်လေးများ အပိုင်း (၂)
၁။ ကျွန်မရဲ့ရုံးက ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က အရင်တစ်ပတ် ရုံးကနေ အိမ်ကို ပြန်တဲ့အခါမှာ ကားတိုက်မှု ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ သူ့အသုဘမှာ ရုံးက ဝန်ထမ်းတွေ အားလုံးက မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက် ဖြစ်နေကြတယ်။ ရုံးဝန်ထမ်းတွေက "သူက အရမ်းတော်တာ။ သူ့ကို အားလုံးက အရမ်းချစ်ကြတာ် " ဆိုပြီး...
Facebook သုံးစဉ် ချစ်သူတို့ သတိထား ရှောင်ကြဉ်ဖို့ရာ
ဒီနေ့ခေတ်မှာ Facebook ဆိုတာ လူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝအထိ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ မရှိမဖြစ်အရာ တစ်ခုလို့တောင် တင်စားလို့ရနေပါပြီ။ ဒီ လူသုံးများတဲ့ လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ facebook ကို သင့်တင့်မျှတစွာသုံးမိရင်တော့ ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးရလာဒ်တွေ အများကြီး ရလာနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း “တန် ဆေး လွန် ဘေး”...
မိဘတွေဆီက အတုမြင် အတတ်သင်ခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး သာယာစေတဲ့ နည်းလေးများ
GandaWinAdmin - Sep 8, 2015
ကလေးတွေဟာ အများအားဖြင့် သူတို့မိဘတွေကို ကြည့်ပြီး အတုမြင် အတတ်သင် လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ကလေးတွေ အတုယူတဲ့ အရာတွေထဲက အရေးကြီးတဲ့ တစ်ခုကတော့ မိဘတွေရဲ့ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး ပြုမူဆက်ဆံမှုပါပဲ။ ကျွန်မက အရမ်းကို ကံကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ငယ်ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာပါ။ မိဘနှစ်ဦးကြား တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ချစ်ခင်မှု...
လေဖြတ်ခြင်း၊ သွေးကြောထဲမှာ သွေးခဲခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးမယ့် လက်ဖြစ်ဖျော်ရည်လေး တစ်ခွက်
ယခုတစ်ပတ် ဂန္တဝင်မဂ္ဂဇင်းကနေ တင်ဆက်ပေးချင်တာက သွေးခဲတာတွေ၊ လေဖြန်းတာတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ကီဝီသီး ဖျော်ရည်လေးအကြောင်းပါ။ ဒီဖျော်ရည်လေးကို သောက်ခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ဘာတစ်ခုမှ ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဖျော်ရည်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖျော်ရည်လေးမှာ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ် (Potassium) နဲ့ အမျှင်ဓာတ် မြောက်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။...